192.168.8.100 - Ukungena komqondisi - Igama lomsebenzisi nephasiwedi
192.168.8.100 Ikheli le-IP lomuntu siqu elisetshenziswa kuphela ngaphakathi kwe-Exclusive Network. Leli kheli lisetshenziswa ama-modem, ama-routers, namanye amagajethi amaningi. Uzama ukuthola ukungena ngemvume komzila? Usendaweni efanele.
Ikheli le-IP lomuntu siqu linikezwa igajethi ngaphakathi kwamanethiwekhi avaliwe futhi alitholakali ngokukhululekile ukuzingelwa kwi-intanethi. Ukwenza kube lula ukusatshalaliswa kwamakheli e-IP ngaphakathi kwezinhlangano namanethiwekhi, kwakhiwa amakheli abo. Kulula ukukhomba ikheli lakho le-IP ngokucacisa isimo sangempela.
Ama-PW Admin Admin we 192.168.8.100 & 192.168.8.100 I-Login IP ikheli le-IP lapho imizila efana ne-Linksys nenethiwekhi engaphezulu isebenzisa njengezindlela zokungena noma amaphuzu wokufinyelela. Izinhlangano zakha ukufinyelela kwe-router admin kukheli ukuvumela abaphathi benethiwekhi ukuhlela amanethiwekhi abo kanye nama-routers. Ikakhulu umuntu angaphatha amathuba okuphepha, i-DNS, ummeleli, i-IP QoS, i-LAN, izilungiselelo ze-WLAN, i-Network Management, i-DSLMAC, i-ADSL, i-WAN, i-WPS block; phakathi kwabanye.
Ungangena kanjani kalula ku-192.168.8.100?
Ngokusebenzisa 192.168.8.100 Ikheli le-IP lifinyelela ku-Router Admin yakho elingakuvumela ukuthi ubuyekeze ukucushwa nezilungiselelo ezinikezwa isoftware yomzila.
Chofoza 192.168.8.100 noma bhala 192.168.8.100 kubha yekheli lesiphequluli sakho.
Uma lokhu kungaphumeleli, khona-ke 192.168.8.100 akulona ikheli lakho le-IP lomzila. Ngemuva kokukhomba ikheli le-IP le-router, yethule kukheli lakho lesiphequluli se-URL. Uyiswa kuphaneli yokungena yomsebenzisi. Lapha wethula umsebenzisi wakho wendlela & PW.
Uma ungalikhumbuli igama lakho lomsebenzisi ne-PW ugcina nje le miyalo ukuze uphinde uyithole. Uma ungazange uguqule ifayela le- ama-PW okuzenzakalelayo nomsebenzisi okuvela nomzila kufanele ubheke kumaphasiwedi we-router okuzenzakalelayo nohlu lwamagama abasebenzisi. Ngemuva kokungena kumaphaneli okuphatha wama-routers uzokwazi ukuguqula nokuguqula konke ukusethwa kwe-inthanethi.
Uma ubhekene nezinkinga zokuthola i-router yakho ngo-192.168.8.100 (kungalayishwa noma kulayishwe okwengeziwe), amanethiwekhi angadla ikheli elisha lomfanekiso 10.0.0.1, 192.168.2.1, 192.168.0.1. Esimweni esinjalo hlola ikheli uhlu lwe-router IP.
Uma ungumnikazi wenethiwekhi yasekhaya futhi une-smart phone, i-PC yedeskithophu, ithebhulethi ne-laptop. Ngomzila ophakathi lawa magajethi wonke axhumeka ku-inthanethi. Esikhundleni sedivayisi ehlukile kunethiwekhi enikezwe ngekheli le-IP lomphakathi, umphakathi owabelwe Ikheli le-IP ozoyisebenzisa unikezwe umzila.
Irutha inganikezwa ikheli le-IP elisesidlangalaleni, kepha lizohlukanisa ikheli elikhethekile ne Iphrothokholi ye-DHCP kuwo wonke amadivayisi kunethiwekhi. Amagajethi kunethiwekhi yakho azodluliselana esebenzisa ikheli lawo le-IP, futhi i-router ingasebenzisa ikheli le-IP lomphakathi ukwenza ukuxhumana kube lula kwi-inthanethi. Ngenkathi uxhuma ku-inthanethi, amakheli akho e-IP azohlala efihliwe, futhi ikheli le-IP lomphakathi kuphela liyabonakala.
Ukuze 192.168.8.100 Ubufakazi bokulandelwa kwe-IP kwenziwa nge-PC. Ikheli lephrothokholi ye-Inthanethi yehadiwe ibheka ukucaciswa okufanelekile kwekheli le-IPv4 Internet Protocol.
Izigaba ama-router Imeyili kwemikhumbi